लकडाउन पालना गरौं
विश्व नै कोरोनाको संकटसँग जुधिरहेको छ । यस्तोमा नेपालजस्तो देशमा यसको सहज उपचार सम्भव देखिँदैन । त्यसैले यसको संक्रमण रोक्न आवश्यक र यसका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेको लकडाउन मानिएको छ । त्यही भएर सरकारले १ हप्ताका लागि लकडाउन गरेको छ । तर, बुझ पचाएर धेरैले यसलाई नटेरेको देखिन्छ ।
यस्तोमा प्रहरीले विनाकाम बाहिर निक्लने व्यक्तिलाई सजाय दिन थालेको छ । विगतमा प्रहरीले यस्तै काम गर्दा चर्को विरोध गरेकामा अहिले भने समर्थन गरिरहेका छन् । कोरोना संक्रमण रोक्न अत्यावश्यक कदम भएकाले विनाकारण हिँड्नेहरूलाई कारबाही गर्न मागसमेत गरिएको छ । हुन पनि लक डाउनको पूर्ण पालना नहुँदा रोगको संक्रमण भयावह हुने कुरा इटालीको घटनाबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
जनप्रतिनिधिले समेत लकडाउन नमान्नेलाई लट्ठीले हानेको समाचार आएको छ । रोडमा केही युवाले प्रहरीलाई नटेरेको देखेर लठ्ठी हानेको उनको भनाइ छ । आज लकडाउन मानेनन् भने भोलि कोरोनाका कारण मान्छेका लास उठाउन पनि नभ्याउने अवस्था आउन सक्छ । लास उठाउनुभन्दा त लठ्ठी उठाउन राम्रो हो । वास्तवमा लकडाउन जनतालाई कोरोनाको संक्रमणबाट बचाउन गरिएको हो । पढेलेखेका मानिसले यो तथ्य बुझे पनि मलाई केही हुँदैन भन्ने सोचका कारण घरबाहिर निस्किरहेका छन् । यस्ता मानिसलाई अहिले समाजका लागि खतरा बनेका छन् । त्यसैले सरकारले लिएको कदमलाई सहयोग गरेर नै कोरोनाको संक्रमण रोक्न सकिन्छ । अन्यथा आज इटालीमा जे भइरहेको छ, स्पेनमा जे भइरहेको छ त्यो भन्दा कैयौं गुणा कारुणिक अवस्थामा हामी नेपालीले भोग्नुपर्नेछ ।
गरीबहरूका बारेमा पनि सोच्ने कि ?[२०७६ चैत, १४]
हदै भो लापर्बाही[२०७६ चैत, १४]
आर्थिक प्याकेज खै ?[२०७६ चैत, १३]
अपर्याप्त कदम[२०७६ चैत, १३]